စီးပွားရေးမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
အချမ်းသာဆုံးကသူတို့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အမှန်တရား - ရော်ဘင်ရှာမာ
L’article La vérité sur la façon dont les plus riches créent leur succès- Robin Sharma est apparu en premier sur Je Wanda. Cet article est apparu en premier sur…
Le ministre sénégais de l'Économie, Amadou Hott, à Dakar, le 16 février 2020. © Andrew Caballero-Reynolds/AP/SIPA Mis sur pied après la crise qu’a...
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် Express Union သည်စင်တာတစ်ခုတွင် FCFA ဘီလီယံဝက်နီးပါးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
(Cameroon in Business) - ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လကအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီး Achille Bassilekin III သည်Yaoundé၏ဗဟိုချက်တွင်ရှိသောစီးပွားရေးစင်တာကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ သူကအလုပ်ပါ ...
စိတ်အားထက်သန်မှုကတောင်များကိုရွေ့လျားသွားသောအခါ - Harriet muchu၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုတွင်တောက်ပသောအလင်း - …
သူမသည်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုကိုသူ၏အကောင်းဆုံးဘဝအဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့မျက်လုံးများသည်ပျော်ရွှင်မှုဖြင့်အရောင်တောက်နေသောကြောင့်စိတ်မပျက်ခဲ့ပါ။ Harriet Muchu ကသူမရဲ့နာမည်ကိုသူမရဲ့အက္ခရာများထဲမှာထွင်းထုရာမှာမရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
အော်ပရေတာ Orange Cameroon က 3G စနစ်ကိုနိုင်ငံ၏မြို့ကြီးအသစ် ၁၈၅ သို့ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်
(Business in Cameroon) - ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Orange ၏လက်အောက်ခံ Orange Cameroon မှတယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာသည်၎င်း၏မြို့များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ရန်၎င်း၏လွှမ်းခြုံမှုကိုဆက်လက်တိုးချဲ့နေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Exportation du cacao et importation des pièces des véhicules : le Cameroun sur la voie de la…
(Investir au Cameroun) - A fin décembre 2020, plusieurs innovations pourraient être implémentées dans le commerce transfrontalier du Cameroun si l’on s’en tient à certaines…
ခေါင်းဆောင်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုငြင်းဆန်သော Air Senegal သည်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် - Jeune Afrique
Air Senegal သည်“ အထူး” လေယာဉ်များကို Paris, Marseille, Barcelona နှင့် Milan များနှင့် Casablanca သို့ပြန်လည်ပျံသန်းခဲ့သည်။ © Barka Diop / Wikipedia CC လိုင်စင် ...
123 ... 98 လာမယ့်